Otu esi echekwa okwuntughe na iPhone n'enweghị nsogbu | Nzukọ mkpanaka
Otu esi echekwa okwuntughe na iPhone n'enweghị nsogbu
Daniel Terrasa | 07/10/2021 09:00 | Mac, Sistemụ arụmọrụ
Ijikwa okwuntughe anyị nke ọma nwere ike bụrụ ihe mgbu nye ọtụtụ n'ime anyị. Enwere ọtụtụ ngwaọrụ, ngwa na weebụsaịtị anyị na -ejikwa kwa ụbọchị! Akaụntụ ndị ọrụ, ụlọ akụ dijitalụ, koodu nnweta ... Ọ bụ ya mere o ji atọ ụtọ ịmara otu esi echekwa okwuntughe na iPhone.
Tupu ịga n'ihu, ọ dị mkpa ịkọwa ihe: Mba, ọ bụghị ezigbo echiche iji otu igodo ma ọ bụ paswọọdụ maka ihe niile. Na -atụfu nke a, ọ dịkwa mkpa ịkọwapụta na ọ bụghị ihe amamihe dị na idobe ha niile na laptọọpụ. Yabụ kedu nhọrọ ọzọ anyị nwere? Nke a bụ otu: Ọ bụrụ na ị nwere iPhone, ekele ọrụ autocomplete, ị nwere ike chekwaa okwuntughe gị niile ma jiri ya oge ọ bụla ịbanye na akaụntụ gị ọ bụla.
Ọ bụrụ na ị nwere nchegbu gbasara okwu nchekwa, ihe niile anyị na -agwa gị n'okpuru ga -atọ ụtọ nke ukwuu:
1 Mezuo akpaaka maka Safari
2 Keychain maka ngwaọrụ Apple
3 Ngwa ịchekwa okwuntughe na iPhone
3.3 Onye njikwa paswọọdụ na -echekwa
3.4 Nkwụsị ikpeazụ
3.5 Onye njikwa paswọọdụ mSecure
3.6 Otu Nchekwa
3.8 SafeInCloud Paswọdu Manager
Mezuo akpaaka maka Safari
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịchekwa okwuntughe na iPhone gị, ọ ga -adị mkpa ka ịgbalite faịlụ Ọrụ AutoComplete. Nke a bụ otu ị kwesịrị isi mee ya:
Buru ụzọ gaa "Isetịpụ".
Mgbe ahụ nweta Okwuntughe na akaụntụ.
N'ikpeazụ, n'ime Nhọrọ "Autocomplete" ị ga -ebugharị ihe mmịfe ahụ gaa na ọnọdụ "nọ" (na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ).
Ozugbo emechara nke a, ọrụ AutoComplete ga -arụ ọrụ na iPhone gị. Ma anyị họrọ okwuntughe nke iPhone tụrụ aro ma ọ bụ anyị kpebie iji otu nke anyị, ọrụ a ga -echeta aha njirimara na okwuntughe echekwara wee banye n'ime ya ozugbo ịmalitere nnọkọ ahụ. Ya mere bara uru.
Keychain maka ngwaọrụ Apple
Site na Keychain anyị nwere ike chekwaa okwuntughe anyị n'enweghị nsogbu na iCloud
Ọ bụ ezie na ịkwesighi iji Keychain iji chekwaa okwuntughe na iPhone, ee, anyị ga -eji ya dobe okwuntughe ndị a na akaụntụ anyị iCloud. Ngwaọrụ a na -arụ ọrụ maka ngwaọrụ Apple ọ bụla.
Keychain (okwu nke pụtara n'asụsụ Bekee "keychain") bụ sistemụ njikwa okwuntughe na macOS, ewepụtara site na ụdị Mac OS 8.6 na 1997. sọftụwia a ọ nwere ike ịnwe okwuntughe, igodo onwe na asambodo.
Kedu ka Keychain si arụ ọrụ na iPhone? Anyị na -akọwara gị ya n'okpuru:
Nzọụkwụ mbụ bụ ịga "Isetịpụ".
N'ebe ahụ anyị na -ele anya "ID ID" na n'ime nhọrọ a anyị na -ahọrọ ICloud.
N'ime menu ntọala iCloud, anyị pịgharịa gaa na ala wee họrọ "Keychain".
N'ikpeazụ anyị pịa "ICloud Keychain" na -ebugharị ihe mmịfe ahụ gaa n'ọkwa akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ.
Mgbe ịgbalite Keychain, ị ga -aga na ngwaọrụ Mac (kọmputa ma ọ bụ iPad) iji nwee ike iji okwuntughe echekwara ebe ahụ na iPhone. Iji jikọta ozi a, gaa n'ihu dị ka ndị a:
Mbụ anyị na-aga menu "Manza".
N'ebe ahụ ka anyị ga -ebu ụzọ họrọ "Mmasị sistemụ", mgbe "ID ID" n'ikpeazụ ICloud.
Iji mechaa, anyị ga -pịa nhọrọ naanị "Keychain".
Igodo igodo iCloud a bụ nnukwu ngwa iji jikwaa okwuntughe anyị n'enweghị nsogbu. Ka o sina dị, nchekwa gị bụ naanị maka iji n'ime gburugburu ebe obibi Apple. Tụkwasị na nke ahụ, a kọwo ụfọdụ ọdịda na arụ ọrụ ya, nke gbara ọtụtụ ndị ọrụ ume ịhọrọ ngwa mpụga maka igodo ha. Nke a bụ ndị kacha ewu ewu ma dị irè:
Ngwa ịchekwa okwuntughe na iPhone
Ngwa dị na ndepụta a na -enyekwa anyị ohere ịchekwa okwuntughe na iPhone. Nke ahụ pụtara inwe ike tinye ha ngwa ngwa mgbe ị na -abanye na akaụntụ anyị. Naanị ihe anyị chọrọ. Ọ bụ eziokwu na ọrụ ya na -adịkarị mgbagwoju anya karịa ọrụ AutoComplete, mana arụmọrụ ya enweghị mgbagha. Ndị a bụ ndị kachasị mma:
Ngwa njikwa paswọọdụ iPhone kacha ewu ewu: 1Password
Iji malite ndepụta ahụ, anyị ahọrọla ihe doro anya bụ ngwa kachasị ewu ewu na Storelọ Ahịa App maka ụdị ọrụ a, ya na nde ndị ọrụ gburugburu ụwa. 1Password na -enye nke ziri ezi na nke kachasị nke njikwa okwuntughe anyị.
O di nwute, 1Password abụghị ngwa efu. Ọ na-enye oge ikpe ụbọchị 30 n'efu. Mgbe oge a gasị, onye ọrụ ahụ ga -enwe oge zuru oke iji mara ngwa a yana uru ọ na -enye tupu ya ekpebie nkwekọrịta ụdị akwụ ụgwọ ma ọ bụ họrọ maka usoro ọzọ.
Chekwaa okwuntughe na iPhone na Dashlane
Ngwa ọzọ ejiri ọtụtụ ebe iji chekwaa okwuntughe na iPhone. Dashlane na -enye anyị ohere ịchekwa okwuntughe na -akparaghị ókè. Na n'ezie ịnweta ha ebe ọ bụla. A ga -edobe data anyị na mmekọrịta na ngwaọrụ niile etinyere ngwa ahụ, n'agbanyeghị sistemụ eji arụ ọrụ.
Akụkụ na -atọ ụtọ nke ngwa a bụ onye na -emepụta paswọọdụ ya. Otu a bụ nhọrọ nke inwe ike ịkekọrịta okwuntughe na ngwaọrụ ndị ọzọ n'enweghị nsogbu. Na nkenke, nnukwu nhọrọ ịtụle maka njikwa nke okwuntughe anyị nke ọma.
Onye njikwa paswọọdụ na -echekwa
Okwuntughe gị, enwere ike ịnweta yana chekwaa ya na nchekwa
Nchebe ọ na -enye anyị Onye njikwa paswọọdụ na -echekwa iji chekwaa okwuntughe anyị yana ozi nzuzo anyị dị oke elu. Enwere ike ịsị na ọ bụ mkpuchi megide mwakpo nke ndị omekome cyber mechara. Iji ngwa a bụ ụzọ dị mma isi hie ụra n'udo.
Onye njikwa paswọọdụ na -enye anyị ohere ịchekwa okwuntughe na -akparaghị ókè. Ọ na -enyekwa anyị nhọrọ iji mepụta na dejupụta okwuntughe siri ike yana, n'ezie, gakọrịta ma jikwaa okwuntughe anyị na ngwaọrụ dị iche iche. Ọzọkwa, ngwa a bụ dakọtara na Touch ID yana na Nje ID, nke na -enye usoro mmeghe ha. Nke ahụ bụ, nchekwa gbakwunyere bara uru iburu n'uche.
Njikọ: Onye njikwa paswọọdụ na -echekwa
Njedebe ikpeazụ: onye njikwa paswọọdụ na onye njikwa maka iPhone
Onye njikwa paswọọdụ Nkwụsị ikpeazụ Ọ na -arụ ọrụ n'otu ụzọ yiri ngwa ndị ọzọ dị na ndepụta a. Isi ọrụ ya bụ ịchekwa na jikwaa data na okwuntughe anyị n'ụzọ echekwara. N'otu aka ahụ, dị ka ndị ọzọ, ọ na-enye ọrụ nke imecha nzere anyị na akpaaka, si otu a na-ezere iji aka tinye paswọọdụ.
Njikọ: Nkwụsị ikpeazụ
Onye njikwa paswọọdụ mSecure
mSecure: nchekwa mbụ
Dị ka aha ahụ na -egosi, ngwa a na -elekwasị anya na nchekwa. Eziokwu bụ nke ahụ Nchekwa Ọ bụ ezigbo njikọ maka udo nke uche na nzuzo anyị gbasara njikwa okwuntughe na data nkeonwe na iPhone. Nakwa na ngwaọrụ ọ bụla ọzọ ebe anyị nwere ike iwunye ya.
Isi ihe dị na ngwa a bụ ngwa ọrụ ya dị mfe yana ọkachasị ọnụọgụ ntinye ya na -akparaghị ókè. Nke ahụ bụ, ị nwere ike chekwaa ọtụtụ okwuntughe ịchọrọ, na -enweghị oke. Ọ dịkwa mkpa igosipụta ụdị izo ya ezo, emezigharị kpamkpam na ụdị ọhụụ. N'ikpeazụ, ekwesịrị ikwupụta na mSecure nwere onye na-emepụta paswọọdụ bara uru yana ihe karịrị ndebiri 20 arụnyere.
Njikọ: Onye njikwa paswọọdụ mSecure
OneSafe +, ngwa nwere ihe nzuzo nzuzo dị elu
Mgbe ewepụtara ya, a kwalitere ngwa a dịka "Nchekwa kacha dịrị nchebe maka akpa gị". Na agbanyeghị na njirimara ya karịrị ma ọ bụ obere ka nke ngwa ndị ọzọ nyere na ndepụta a, ọ bụ eziokwu na ọ na -enyekwa anyị akụkụ pụrụ iche n'ezie.
Dịka ọmụmaatụ, OneSafe + Ọ nwere ọnọdụ gbara ọchịchịrị, ụzọ mkpirisi Siri, enwere ike iji Apple Watch na ọtụtụ ọrụ ndị ọzọ. N'ikwu okwu banyere nchekwa, ngwa a na-ekwe nkwa nchekwa nke data na okwuntughe anyị site na izo ya ezo AES-256 (ọkwa kachasị dị na ngwaọrụ mkpanaka).
Njikọ: Otu Nchekwa +
Cheta, ngwa bea ahụ iji chekwaa okwuntughe na iPhone
Ọzọ ngwa kachasị ewu ewu iji jikwaa okwuntughe na iPhone n'ụzọ dị nchebe yana nke ọma. Cheta A maara ya nke ọma maka "mascot" ya, anụ ọhịa bea na -enyere anyị aka icheta okwuntughe na nzere anyị ebe ọ bụla anyị na -aga.
Site na interface a na -ahụ anya nke ọma, ngwa a na -enye ụzọ dị mfe ma dịkwa mfe iji mepụta, chekwaa ma jiri okwuntughe. Na mgbakwunye na nke ahụ, ọ na -enyekwa anyị ohere ịchekwa kaadị kredit na ịzụrụ ihe n'ịntanetị n'enweghị nsogbu na ngwa ngwa. Ịkwụ ụgwọ anyị ji iPhone anyị eme na-adị ngwa ngwa, ebe ọ bụ na Remembear na-elekọta imeju ozi na kaadị anyị. Na ndị niile nwere oke nchekwa na ntụkwasị obi.
SafeInCloud Paswọdu Manager
SafeInCloud, iji chekwaa okwuntughe na iPhone
Iji mechie ndepụta ahụ, ngwa ọzọ ejirila gburugburu ụwa: SafeInCloud. Nke a bụ otu ngwa kachasị mfe iji, na -enweghị nke pụtara na ọ naghị arụ ọrụ nke ọma yana nchekwa karịa ndị ọzọ. Na -enye gị ohere iji ma Touch ID na ID ihu. Na mgbakwunye, ọ nwere ngwa akọwapụtara maka Apple Watch.
Na nkenke, onye njikwa paswọọdụ nke na -enye anyị ohere idobe ndekọ aha anyị, okwuntughe na ozi ndị ọzọ n'enweghị nsogbu na nchekwa data ezoro ezo. Oke nchekwa. N'otu aka ahụ, dịkwa ka ọ dị na ngwa ndị ọzọ na ndepụta a, a ga -emekọrịta data niile echekwara na ya na ngwaọrụ ọ bụla anyị ji, ọ bụrụhaala na anyị etinye ya na ha.
Njikọ: Nchọta Nchekwa
Pathzọ zuru ezu na edemede: Nzukọ Ekwentị » Sistemụ arụmọrụ » Otu esi echekwa okwuntughe na iPhone n'enweghị nsogbu